China Soft PVC imbasa mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iimbasa zihlala zisetyenziswa kwezemidlalo, ezikolweni, emathekweni nakwiminyhadala yokufumana amabhaso, izikhumbuzo, ukunyuselwa kunye nezipho. Ukujonga okunempilo, okusingqongileyo kunye nezinye izibonelelo, imibutho engakumbi nangakumbi ikhetha iimedali ezithambileyo zePVC endaweni yeembasa zesinyithi zesintu.
Iimbasa zihlala zisetyenziswa kwezemidlalo, ezikolweni, emathekweni nakwiminyhadala yokufumana amabhaso, izikhumbuzo, ukunyuselwa kunye nezipho. Ukujonga okunempilo, okusingqongileyo kunye nezinye izibonelelo, imibutho engakumbi nangakumbi ikhetha iimedali ezithambileyo zePVC endaweni yeembasa zesinyithi zesintu. Iimbasa ze-PVC ezithambileyo zenziwe yimathiriyeli efayo ye-PVC ethambileyo ethambileyo kwaye ilula, ilungele indalo esingqongileyo, intle ukuchaza iilogo ezinemigangatho ngemibala eqaqambileyo nebalulekileyo.
Iimbasa zethu ezithambileyo ze-PVC zihlala zenziwa ngokokuyilwa kwabathengi. Iimpawu zingenziwa kwi-2D okanye kwi-3D kumacala amabini okanye omabini, ngombala ogcweleyo, uprintiwe, inkqubo yokukrola i-laser njl njl njl. Ngezincamathiselo ezahlukeneyo, iimedali ezithambileyo zePVC zinokuqhotyoshelwa kwiiribhoni okanye kwiibhanti zeribhoni. Iimpawu ziyabekwa kuphela kwiimedali, kodwa kunye neeribhoni okanye imivalo yeeribhoni, ukubonisa izinto ezininzi kunye nokubhengeza iimveliso zakho kunye nezifundo ngcono.
Motifs: Die Struck, 2D okanye i-3D, amacala angatshatanga okanye aphindwe kabini, uyilo lungenziwa ngokwezifiso.
Imilo: Ujikeleze, isikwere, okanye naziphi na iimilo ngokoyilo lwakho
Ubungakanani: ngaphantsi kwe-150 mm okanye kuxhomekeke kuyilo lwakho
Ukugqiba: IiLogo zinokugcwaliswa ngombala, ziprintwe, zenziwe ngebhosi okanye zilahlwe, iLaser
ukrolwa njalo njalo
Ukupakisha: 1pc / polybag, okanye ulandele umyalelo wakho.
Egqithileyo Iphepha lepensile lePVC
imbasa ye-pvc ethambileyo